तिथि मेरो पत्रु » 12 श्रीमती को लागि अमीर पर्छ. सही
1. सन्तुलन कायम गर्दा आफ्नो जीवनको बारेमा भावुक छ कसैले. यो उनको रोमान्टिक सम्बन्ध हुनुहोस्, उनको परिवार, उनको काम, आफू र स्वैच्छावाद. उनको आसपास प्रेरित जीवन बाँचे बारेमा भावुक छ कसैले. हामी सबै एक सानो प्रेरणा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
2. साहस गर्ने व्यक्ति कमजोर हुन आवश्यक र हुकुमी जब आवश्यक गर्दा. त्यो उनको संग रसायन छ गर्नेहरूलाई खोल्न गर्नुहुन्छ तर चाहिएको बेला त्यो स्पष्ट सीमाहरु आकर्षित गर्न सक्षम छ.
3. कसैले तपाईं आफैलाई हुन सक्ने. न्याय हाम फाल्ने तर बुझ्न अघि बढ्न र पत्ता लगाउन नगर्ने एक व्यक्ति असहमत सहमत सक्ने एउटै व्यक्ति छ.
4. प्रशंसा कसैले3तपाईं बारेमा झन् खराब दोषहरु र तपाईं बधाई आफ्नो3झन् खराब त्रुटिहरूले. पारस्परिकताको महत्वपूर्ण छ. तपाईं उनको जस्तै आफ्नो जीवन लागि योगदान गर्न सक्छन् व्यक्तिलाई खोज्नुहोस्. लामो बोझिलो जाँच सूची मुक्ति छैन; यो सबै भन्दा राम्रो मा एक शृंखला हो.
5. रोज्ने कसैले प्रकारको बरु सही भन्दा हुन. आफु गर्न सडक मा घरबारविहीन व्यक्ति गर्न वेटर देखि.
6. कसैले जो त्यो खेद छ भन्न सक्छौं. म गल्ती स्वीकार गर्न तत्परता निको तिर एक ठूलो कदम हो भन्ने पत्ता लगाउन. प्राय पल्ट, कि एकदम राम्रो छ.
7. एक ठूलो conversationalist छ कसैले. त्यो यति बहु-faceted र रोचक छ किनभने तपाईं सिर्फ उनको कुरा मन.
8. बौद्धिक उत्सुक छ जो कसैले. त्यो बस को बारे मा सबै प्रश्न, आफु सुधार ख्याल राख्नुहुन्छ र सिक्ने रोक्दैनन्.
9. तपाईं संग कठिन समय को माध्यम जान चाहने कसैले. त्यो तपाईं द्वारा खडा र कुराहरू दक्षिण जाँदैछन् तपाईं समर्थन गर्ने तप छ.
10. उनको जाते राम्रो हेरचाह गर्ने व्यक्ति. त्यो बनाउँछ पक्का तिनीहरूले स्वस्थ छन्, सफा र खुसी. त्यो दाबी गर्छ भने त्यो उनको घरपालुवा जनावरको माया तर तिनीहरूले अव्यवस्था को एक राज्य मा हो, त्यो तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने कल्पना? तपाईं मेरो बहाव प्राप्त.
11. लगातार तपाईं को लागि सानो काम गर्छ कसैले. यी कुराहरू गरिरहेको को समर्पण र दिन बाहिर दिन धेरै भन्छन्.
12. यस्तै वित्तीय विचार गर्ने व्यक्ति. के तपाईं आफ्नो सम्बन्ध गाँस्न सक्नुहुन्छ त एक स्थिर वित्तीय भविष्य निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ. तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ अन्तिम कुरा पैसालाई लडाई छ.